Shiinaha Badeecad Sirdoon oo laba-lugo leh leh BT-320 iyo alaab-qeybiyeyaal. Qalinka
Badeecad Sirdoon oo laba-taayir leh BT-320
BT-320 waa aaladda dhawaaqa digniinta ee Bluetooth ee e-baaskiil. Terminalku wuxuu leeyahay shaqooyin badan sida soosaarka qufulka elektarooniga ah, xakamaynta fog ee 433M, ogaanshaha gariirka, qaylada dhawaaqa dhawaaqa, xakamaynta codsiga mobilada e-baaskiil, furitaanka dhawaanshaha dhawaanshaha, tirakoobka masaafada, wadaagista safarka iyo tirakoobka, isgaarsiinta xakamaynta iyo qaylo-dhaanta, E-baaskiilka is-kormeerka iyo shaqooyin kale.
- Inductive iyo furid
- Gawaarida xakamaynta Bluetooth
- Hal-guji bilow
- Qufulka galka
- Falanqaynta xogta weyn
- Taageerida Mall Docking
Heerka biyuhu galaan
ABS + PC, V0 heerka ilaalinta dabka
Masaafada ugu badan ee helitaanka
30m, Meel furan
Barta Joogtada Dhexe
Quful Habka qufulka, haddii terminal-ka uu ogaado calaamadda gariirka, wuxuu abuuraa alaarmiga gariirka.
Fur Xaalada furitaanka, qalabku ma ogaan karo gariirka, laakiin calaamadaha giraangirta iyo calaamadda ACC ayaa la ogaadaa. Qaylo dhaan lama samayn doono.
Ogaanshaha gariirka Haddii gariir jiro, qalabku wuxuu diri doonaa alaarmiga gariirka, dhawaaqa ayaa qaylinaya.
Ogaanshaha wareega wareega Qalabku wuxuu taageerayaa ogaanshaha wareegga giraanta Marka E-baaskiilku uu ku jiro habka qufulka, wareegga giraangirta ayaa la ogaanayaa oo qaylada dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ayaa la soo saari doonaa. Calaamadaha giraangiraha ayaa la ogaadaa.
Soosaarka ACC Sii koronto hagaha. Waxay taageertaa illaa 2 A soo saar.
Ogaanshaha ACC Qalabka wuxuu taageerayaa ogaanshaha calaamadaha ACC. Ogaanshaha waqtiga-dhabta ah ee awoodda korantada ee gaariga.
Mashiinka qufulka Qalabka wuxuu amar u dirayaa kantaroolaha si uu u xiro mootada.
Qaylo Waxaa loo adeegsaday in gaariga lagu dhex adeegsado APP, dhawaaqa ayaa dhawaaqaya dhawaq.
Kontaroolka taleefanka gacanta E-baaskiil Ku xirida wakiilka smart-E-bike, taageerida isku xirka taleefanka gacanta xakamaynta e-baaskiil, furid, koronto, raadinta e-bike iyo wixii la mid ah.
433M Remote (ikhtiyaar) Kantaroolka fog ee '433M' waxaa loo isticmaali karaa in lagu hago meel fog, qufulka, bilowga, iyo helitaanka baaskiilka elektarooniga ah. Muddo dheer riix badhanka furaha kontoroolka fog 1S si aad u furto qufulka salka.
Ogaanshaha awoodda dibedda Ogaanshaha danab batteriga oo leh saxnaan dhan 0.5V .Waxaa loogu talagalay dhabarka dambe inuu yahay halbeegga loogu talagalay wareegga kaladuwan ee e-baaskiiladaha.
Kursiga (Kursiga) qufulka Riix badhanka badhanka furaha fog 1s, fur qufulka kursiga.
In ka badan xawaaraha alaarmiga Marka xawaaruhu ka bato 15km / saacaddii, kantaroolaha ayaa aalad heer sare ah u diri doona qalabka.Marka qalabku helo calaamaddan, wuxuu soo saari doonaa dhawaaqa A 55-62db (A).
Hal-guji shaqeyn boot Taageer e-bike one-click ogaanshaha bilowga.
Hore: Wadaagista mootada IOT WD-209
Xiga: Wax soosaarka Sirdoonka ee laba-lugood leh WA-290
Wheels Baaskiil Wadaag
Kireysiga mooto bajaajka
Wheels Baaskiilada Wadaag